कर्णालीमा ‘एप्पल टुरिजम’ गर्न जाने ?
गत एक दशकभित्र तपाईंले जुम्लाको स्याउ चाख्नु भएको छ? छ भने ‘अर्गानिक स्याउ’ खानु भएको रहेछ।
अहिलेसम्म चाख्नु भएको छैन भने यसपालि कोशिस गर्ने कि? भदौ-असोज महिना स्याउको सिजन हो। यो बेला जुम्ला-रारा यात्रा गर्ने हो भने आफैं बगैंचा डुल्दै रुखबाट स्याउ टिप्दै खाने अनुभव बटुल्न सकिन्छ। चैत पारेर घुम्न जानु भयो भने स्याउ फूलले ढकमक्क ढाकेका सुन्दर बगैंचा भेटिने छन् – ‘चेरी ब्लोजम’ जस्तो ‘एप्पल ब्लोजम’! अर्थात कर्णालीमा ‘एप्पल टुरिजम’ को प्रचुर सम्भावना छ।
कर्णाली पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘एप्पल टुरिजम’ फरक आयामसहित एउटा नौलो र आकर्षक सम्भावना क्षेत्र हुनसक्छ। हाल यसको खास चर्चा नभए पनि भविष्य छ। उपयुक्त ब्रान्डिङ जरुरी छ।
स्थानीयले जुन उत्साहसाथ लगानी गरेका छन्, त्यो गतिशीलता अनुरुप सरकारी प्रयास छैन। अझै वैज्ञानिक ढंगको संरचना, भण्डारण, बजारीकरण र सूचना व्यवस्था छैन। तरकारी बजारचक्र जस्तो स्याउ पनि दलालको ‘ब्यूह’मा फसेको छ। किसानले आफ्नो उत्पादन निकै सस्तोमा बिचौलियालाई बेच्नु परेको छ। हरेक वर्ष सिजन सुरुसँगै बर्खाले भत्काउने राजमार्गको चिन्ता बोकेर स्याउको ‘नाजुक’ व्यापार सुरु हुन्छ। किसान र साना व्यापारीले बेहोर्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी र दीगो संयन्त्र छैन।
कर्णालीको एकमात्र प्रमुख निर्यातमुखी उत्पादन स्याउ हो। खाद्य पदार्थ, औषधीजन्य उपयोग र सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री रुपमा समेत प्रयोग गर्न मिल्ने सम्भावना भए पनि स्याउ पूजाआजा, बिरामी तथा पाहुनाभेट जस्ता गतिविधीमा बढी खपत हुन्छ। त्यसैले जुम्लाका स्याउ व्यापारीले तिजका बेला त्यो ‘एक मौका’ भेट्न दौडधुप गर्नुपर्छ। थोरै केही उद्योग स्याउजन्य पेयपदार्थ र अन्य परिकार उत्पादन गर्न खुलेका छन्।
‘स्याउ ताईंछुन्, नास्पाति ताईंछुन्, बागबानी फाराम। निको छ क्याS आलोपालो, गाथ छ क्याS आराम।’ देउडा सुरु गर्दा प्रायः गाइने यो टुक्कासँग कर्णालीमा स्याउको आधुनिक इतिहास जोडिएको छ। करिब आधा शताब्दीअघि बि.सं २०२२ सालमा भारत सरकारको सहयोगमा ‘बागबानी फार्म’हरू खुल्न थाले। जुम्ला र हुम्लामा पनि एक-एकवटा फार्म खुले। त्यहाँ बाहिरबाट ल्याइएका फलफूल रोपिए। केही वर्षभित्र स्थानीयले पहिलो चोटी स्याउ, नासपाती लगायत नयाँ फलफूल देखे। अनि देउडा गीतमा यी विम्ब सुरु भए। २०२६ सालबाट प्रकाशित कर्णालीको ‘बेन्नु’ पत्रिकाको पहिलो टुसोमा पहिलोचोटी यो गीत उल्लेख छ।
पश्चिमा मिथकअनुसार स्याउ मानव जीवन उत्पत्तिसँग जोडिएको छ। सुन्दर ‘एडेन गार्डेन’मा विचरण गर्ने आदिमानव आदम र इभलाई ईश्वरले ‘नटिप्नु है!’ भनि वर्जित गरेको ‘ज्ञानवृक्षको फल’ स्याउ नै थियो। उनीहरूले त्यो स्याउ नचाखेको भए सायद अहिलेको मानव जाति अस्तित्व मै आउने थिएन कि?
आधुनिक भौतिक विज्ञानको उदय पनि स्याउसँग जोडिएको छ। रुखबाट झरेको स्याउले ३३१ वर्षअघि न्युटनलाई गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त सुझायो। ४१ वर्षअघि स्टिभ जब्सले कम्पनी नाउँ ‘एप्पल’ र ‘एकछेउ टोकिएको स्याउ’ लाई लोगो छाने। गतहप्ता मात्रै एप्पल एक खर्ब डलर सम्पति हुने विश्वकै पहिलो कम्पनी बनेको छ।
अचेलका स्याउ वर्णशंकर गरिएका उन्नत जातका हुन्छन्। यिनका पुर्खा भने हालको कजाखिस्तान र चीनका ठण्डा पहाडतिर भएको पाइन्छ। कजाखिस्तानमा स्याउलाई अल्मा भनिन्छ। हालको राजधानीको पुरानो नाउँ ‘अल्मा आटा’ को अर्थ नै ‘स्याउको पिता’ हो।
स्याउको बियाँसँग पनि रोचक तथ्य र प्रसंग जोडिएका छन्। यसको बियाँ खान हुन्न भन्ने कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ। स्याउको बियाँ चपाउँदा त्यसमा भएको ‘एमिग्डालिन’ पाचनरस (ईञ्जाइम)सँग मिसिँदा हाइड्रोजन साइनाइड बन्छ। यो एकप्रकारको बिषालु पदार्थ हो। एक किलो बियाँमा ७०० मिलिग्राम बराबर साइनाइड हुन्छ जसले ७० केजी तौल भएका ७ जना मानिस मर्न सक्ने बताइन्छ।
बलिउड अभिनेत्री श्रीदेवीको अन्तिम फिल्म ‘मम’ मा न्याय नमिल्दा आफ्नी छोरीका बलात्कारीलाई बदला लिन एउटी बायोलोजी शिक्षिका आमाले स्याउका बियाँको प्रयोग गर्छिन्। दोस्रो विश्वयुद्ध बेला हिटलरको नाजी पार्टीले विरोधी मार्न बनाएको ग्यास च्याम्बरमा राख्ने ‘जिक्लोन बी’ नामको विषालु पदार्थमा हाइड्रोजन साइनाइड नै मिसाइएको हुन्थ्यो। सन् १९२० ताका यो ग्यास आविस्कार गर्ने जर्मनीका एक यहुदी फित्ज हबेर थिए। सन् १९४२ तिर यही ग्यासको प्रयोग गरी लाखौं यहुदी मारिएको थियो।
स्याउका बहुआयामिक गुणले ‘एन एप्पल अ डे किप्स डाक्टर अवे’ भन्ने भनाइ नै जन्माएको छ। स्याउमा ‘बी’ कम्प्लेक्स भिटामिनहरू, भिटामिन सि, फाइबर, पोटासियम लगायत तत्व पाइन्छ। स्याउको बोक्रामा एन्टी-अक्सिडेन्ट यौगिक पाइन्छ।
पश्चिमा देशतिर स्याउलाई ‘ईश्वरको फल’ उपनामले पनि चिनिन्छ। भारत वर्षका महाकाव्य लेखिने युगमा यदि यो क्षेत्रमा स्याउ फैलिसकेको हुन्थ्यो भने सायद सावरीले श्रीरामलाई सभक्ति बयरसँगै स्याउ भेट दिने थिइन्। सेतोपाटीबाट साभार
Posted on August 12, 2018 Author Categories ऊर्जा-पर्यटन, विचार-ब्लग
Previous Previous post: प्रदेश सभाहल नै चुहिन थाल्यो
Next Next post: संघीयता कामै नलाग्ने भन्नु कमजोरी : सांसद सिलवाल